लकडाउनमा घर आउन नपाएका श्रीमान अर्कै महिलासंग कोठामा मृ’त फेला परे, श्रीमतीको वेहाल (भिडियो हेर्नुस्) – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/लकडाउनमा घर आउन नपाएका श्रीमान अर्कै महिलासंग कोठामा मृ’त फेला परे, श्रीमतीको वेहाल (भिडियो हेर्नुस्)
वर्दिया । घ ट ना बर्दियाको हो । लकडाउनको समयमा काममै होलान् भनेका श्रीमान अर्कै महिलासंग मृ त फेला परेपछि श्रीमतीको बिचल्ली भएको छ । महिला झु ण्डि एको अवस्थामा र पुरुष खाटमा सुतेको अवस्थामा मृ त फेला परेका हुन् ।
श्रीमती र छोराछोरी समेत रहेको पुरुष ति महिलाका घरमा कसरी गए ? अथवा कसैले उनलाई त्यहाँ सम्म कसले लग्यो ? यो अनुसन्धानको विषय हो । उनको परिवारका सदस्यले भने आफ्नो छोरा त्यस्तो ब्यवहार गर्ने खालको नभएको भन्दै घ ट नाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
श्रीमानले अर्कै श्रीमती लिएर भारत गएपछि एक्लै बस्दै आएकी महिलाको घरमा उनी मृ त फेला परेका हुन् । ति महिलाले भर्खर नयाँ घर बनाएकी थिइन् । भिडियोमा देखिएको यो घर उनै महिलाको घर हो ।
उनले आफ्नो श्रीमानको मोवाइलमा कहिल्यै केटीको फोन पनि नआएको बताएकी छन् । उनले आफ्नो श्रीमान माथि कसैले ष ड य न्त्र गरेको दावी गर्दै सत्य तथ्य छानविन गर्न माग गरेकी छन् । दिउसो खानाखान पनि घर जाने, एक मिनेट पनि कतै नभुल्ने श्रीमान यस्तो अवस्थामा फेला परेपछि श्रीमतीले घ ट ना रह स्य मय भएको बताइन् ।